Waxaa oo dhan laga soo bilaabay shirkad Singapore dhisan ee loo yaqaanno Creative Technology Limited ee 1989 taas oo abuurtay nooc ka mid ah kaarka codka loo yaqaan blaster dhawaaqa 1.0 sidoo kale loo yaqaan "kard dilaaga". Si kastaba ha ahaatee, tani lahaa xaddidaadda ee dareenka ah in music soo saaray mid aan tayo fiican leh, laakiin in ka badan ab tani waxay ahayd in la beddelo.
Si aad u bilaabaan kaarka Sound ah waa nooc ka mid ah qalabka ku rakiban ee kombiyuutar ku lifaaqan motherboard si ay u oggolaadaan in aqbasho, geeddi-socodka iyo samatabbixin runta ahaa waa ehlu barnaamijyada kombiyuutarka. Taasi waxay hagaajin laga yaabaa in mararka qaarkood tayada codka inkastoo computer isagoo nidaamka hidi-dhafan si ay taasi ku habboon.
Waxaa guud ahaan loo kala saaraa laba:
a) Gudaha codadka kaararka sida audiophile oo diiradda saarayaa tayada daahir codadka.
b) kaararka dhawaaqa ay ciyaareyso ay in ay diiradda saaraan dalwaddii emulator dhawaaqa hareereeya iyo saamaynta dhawaaqa.
Sida habboon, kaarka codka muddo ka dib ayaa kaalin aad u weyn adduunka ballaadhan kombiyuutarada shukaansi ka times of "dhawaaqo" halkaas oo aydnaan dhegaysan laga yaabaa inuu ciyaaro kulan music mana ahayn maqalka codadka beeping ah.
Dhinaca kale, emulator ah ka timaada la jaanqaadaan hadalka taas oo macnaheedu yahay in ay "si aad nuqulka, inuu ku daydo ama soo saari". Iyadoo tan maskaxda, emulator kaarka codka ah waa software in dhaqmo sida kaarka codka farqiga kaliya waa u soo diro dhawaaqa in aadi lahaa ku hadla si ay file ah halkii.
Sound Card Virtual sidoo kale loo yaqaan Virtual Audio Driveris emulator kaarka codka ah in si ula kac ah loogu tala galay wareejinta calaamadaha audio si digital ah oo loo isticmaali karaa si ay u qoraan, ama isbedel edit iyo dhawaaqa baahinta nidaamka.
Waxa kale oo ay awood u aad in ay ku daydaan kaarka codka kale ee nidaamka ah in aad la isugeeyey karo wax soo saarka kaarka codka jirka ee mid ka mid ah ay aqbasho aan la isticmaalayo fiilooyinka dheeraad ah oo dibadda ah.
Si aad u siin sawir ah waa Win Radio Digital Bridge Card ee Virtual Sound oo waa fursad software loo isticmaalo gudbinta calaamadaha audio si digital ah in codsiyada kale. Mid ka mid ah software aqbalana ay soo diro ayaa webigu ku soo audio qalabka wax soo saarka codsiyada sidaas oo kale ay awoodaan si ay u helaan il ka qalab la gelin ah.
Tani waxay awood u codsiyada dhinac saddexaad in ay ku xiran tahay kaarka codka caadiga ah ee la gelin signal in ay si toos ah u bartaan tusaalooyinka signal digital ka demodulators aqbalana Win Radio. Waxaas oo dhan waxaa lagu sameeyaa ku dul rakibo oo u muuqda sidii aalad dheeraad ah oo ku hoos daaqadaha.
Waxan oo dhan ayaa loo arkaa, ka dib markii qaar ka mid ah sababaha ay dadku u baahan yihiin si ay u abuuraan kaarka codka dalwaddii:
Waxaa jira nabaad-signal sababtoo ah diinta double. Digital Ie si markaas analog analog si digital mar kale waxaa la macaamilooday.
Sidoo kale waxaa jira hoos u dhac ku cable xidhnaanta kaarka codka.
Heerka isticmaalka ee processor waa la dhimay, maxaa yeelay, khayraadka nidaamka qalliinka badbaadiyey in loo qaybin kari lahaa halka la wadaago kaarka codka u dhexeeya laba ama in ka badan codsiyada.
Waxay gacan ka tirtiridda discontinuities signal sababtoo ah xiranyahay hoos / ka badan socon oo waxaa loo sameeyaa by baabi'inta heerka sampling kala duwan ka Win aqbalana radio iyo kaarka codka computer shakhsi.
Isku soo duuboo, kaarka codka dalwaddii hubisaa ugu sareeya tayo signalada digital oo sida uu qaata si toos maray in codsiyada kale signal processing.
Dadaal badan iyo cilmi-baarista la sameeyey ee iftiinka sida loo isticmaalo emulator kaarka codka ah si ay u abuuraan kaarka codka dalwaddii. Fiiro gaar ah oo ku saabsan sida loo isticmaali emulator kaarka codka ciyaaraha ah si ay u abuuraan kaarka dalwaddii hareereeya dhawaaqa noqon doonaa tusaale ahaan caan ah.
Mid ka mid ah sayidkiisa DOS emulator kaarka codka ciyaaraha waa DOSBox ah taas oo awood u leh inuu noqdo dhowr qalabka dhawaaqa taas oo ka dhigaysa doorasho fiican kulamada ugu. Wixii qalab kasta in la kudayasho qaabeynta ah in la sameeyay iyo tan saamaysaa tayada codka.
Qaabeynta waxaa loo sameeyaa iyadoo la kaashanayo of a lala D-weeciyaan Reloaded oo u dhaqmo sida jawi graphic oo uu leeyahay oo dhan files afka u DOSBox sidaas ma jiraan wax badan in la sameeyo oo aan ka ahayn installation.Following yihiin qaar ka mid ah Casharrada ah si ay u caawiyaan baadhi dheeraad ah sida ay u shaqayso : -
Tallaabada waxaan : download ilaa set oo ka mid ah D-soo xirteen. Screen hoos ku qoran u muuqataa ka dib markii ay barnaamijka.
Talaabada II : Isagoo lagala soo bixi oo badbaadiyey kulan meel ka Extras computer click folder ciyaarta ka dibna Open oo halkaas waa inaad ku riddaa files ciyaarta
Tallaabada III : folder kulanka ayaa waxa uu noqonayaa drive dalwaddii isticmaalaan D-weeciyaan ka taagay. Si aad u adeegaan ujeedada tutorial this, Sid Meier ee Ilbaxnimo ka badbaadiyey in folder Download la isticmaalo markaas u dhaqaaqay drive ka Virtual.
Tallaabada IV : Tan iyo markii ay files of kulan waa ku drive dhigay dalwaddii, waa mid ka mid ah ku darto ciyaarta u-D soo xirteen. Taas waxa loo sameeyaa adigoo gujinaya dar Gacanta thenAdd DOSBox Profile. Daaqad cusub u muuqataa editor ie profile oo u muuqataa sida ku cad shot screen hoos ku qoran. File Barnaamijka ayaa lagu wadaa adigoo gujinaya folder icon dhamaadka midig ee file barnaamijka.
Tallaabada V : Tusmada ah drive ka Virtual ka dibna la soo bandhigi doonaa waxaad eegi dhex galka ciyaarta oo raadinaya files barnaamijka. Kulan qaarkood waxay leeyihiin oo kaliya hal file ku qoran, laakiin haddii ay taasi ku ilbaxnimo ayaa ku badan. Mid ka mid ah ayaa xaq u leeyihiin in ay doortaan oo la magacaabay ka dib markii ciyaarta. In tani dooran civ oo guji furan.
Tallaabada IV : Ku soo noqoshada editor Profile ka, waxaad arki doontaa faylka eedeysanuhu berrinkii file barnaamijka. Qaabka keliya ee waa inuu magacaabo ciyaarta duurka magaca profile ah. Marka sameeyo, riix OK. Ciyaarta ayaa ka dhex muuqan doonaa liiska markaas waa inaad ku labanlaabtaa Riix in uu ordo.
Lahaanshaha sameeyey hubiyo in wax walba lagu wadaa buuxa, ku baashaalo oo wuxuu ku raaxaysan!
Top 10 Free Mobile Emulators tijaabo ah oo aad Website
> Resource > Emulator > Sida loo isticmaalo Sound Card Emulator si ay u abuuraan kaarka codka dalwaddii